Sawirro sawirro - Isukeji jpg badan oo khadka tooska ah / qadka ah
Kombaresarada Sawirka Sare
Ku hagaaji cabbirka sawirka iyo tayada muuqaalka khadka tooska ah iyo khadka tooska ah adoo adeegsanaya kombuyuutar sawir jpg ah.
*Waxaad ku dari kartaa 10 sawir si aad u cadaadin karto.
Sidee loo cadaadiyo sawirada?
Dhagsii Add Faylka si aad ugu darto faylasha. Waad ku dari kartaa feylal aan xadidneyn.
Guji Start Cadaadis si aad u bilowdo algorithm-ka riixa si loo yareeyo cabirka sawirka la soo dhejiyay. Guji Tirtir si aad u joojiso.
Guji Soo Degso si aad u soo dejiso sawirkaaga jpeg / png compressed ama sawir isku dhafan ama sawirro.
Waxaad ku cadaadin kartaa JPG, GIF, PNG tayada ugu fiican. Iska yaree cabbirka JPG, GIF, iyo PNG hal meel.
Sidee sawir-qaadista sawirku u shaqeeyaa?
Sawiradaada casriga ah waxay qaataan meel aad u fara badan oo lagu keydiyo. Waa tan sida aan hoos ugu dhigi karno iyaga.
Codsigan wuxuu yareynayaa xajmiga sawirrada isagoo falanqeynaya pixel kasta. Imtixaankeenna, yareynta cabirka faylka ee sawirrada caadiga ah waxay udhaxeeyeen 20% iyo 85%. Kumbuyuutarka sawirku waa barnaamij lagu cadaadiyo laguna cabiro sawirrada dhijitaalka ah, sidoo kalena taxaddar gaar ah loo yeesho sawirradaada dijital ah si loo ilaaliyo tayada sawirkaaga dhabta ah. Kiciyeyaashayada waxaa ka mid ah matoorrada cufan ee lumiya sawir qaadista iyo tiknoolajiyadda si gaar ah loo abuuray.
Halkan waxaa ku yaal tusaale sida barnaamijkani kuu oggolaanayo inaad yareyso cabirka sawirrada.
Kani waa tusaale sawir ah oo ku tusaya inta sawirradaadu ay fiicnaanayaan.
Cadaadiska sawirku waa arjiga khadka tooska ah ee khadka tooska ah.
ku cadaadi sawirada khadka tooska ah iyo khadka toosanba waa codsi sawir qaadis fudud oo xoog leh. Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sawirada ku cadaadi kartid sawirro yar yar oo leh tayo lumis ama isticmaal riixitaan lumis ah. Waxaad ku rakibi kartaa arjiga qalabkaaga oo waxaad ku isticmaali kartaa qad la'aan. Waxaad ku rakibi kartaa barnaamijkan qalabkaaga Windows / Android / Apple / Linux. Codsigan waa codsi bilaash ah oo aanad u baahnayn inaad bixiso nooc kasta oo khidmad ah. Ku dhajinta sawiradaada dalabkeena waa habka ugu fudud ee lagu hubiyo in sawiradaadu yihiin kuwo khafiif ah, xawli deg deg ah iyo wax soo saar diyaar u ah. Sida loo cadaadiyo dhamaan Sawirada bandhig PowerPoint ah. Codsigeena farsamaynta sawirku wuxuu kaa caawin karaa inaad jpg faylka kombuyuutarka kombuyuutarka ugu beddesho khadka bilaashka ama aad u cabirto sawirrada ama aad u yareyso cabirka jpg
In kabadan hal milyan oo soo degsasho ah, codsi riixitaan waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee sawirada sawirada laga helo internetka ama internetka. Waxaan ka caawinaynaa malaayiin sawir qaadeyaal ah, qorayaasha wax qora, mareegaha websaydhada, ganacsiyada, ama dadka aan caadiga ahayn ee kaydinta, dirista, iyo wadaagida sawirada dhijitaalka ah Codsigu wuxuu qeexayaa oo dib ugu siraayaa sawirro si hufan, taas oo u oggolaanaysa inay hagaajiso feylasha muuqaalka iyadoon wax laga beddelayn xallinta ama luminta tayada. Waxaan isku dayeynaa inaan u adeegsano AI yareynta cabirka muuqaalka, sida HBO's Silicon Valley. Barnaamijkani wuxuu sawiradaada ka dhigayaa kuwo si dhakhso ah loogu xirayo iskuxirka qunyar socodka internetka.